Onye kacha ike steroid Mibolerone (Lelee tụlee) online | AASraw
/blog/gallery/Onye na-ahụkarị steroid Mibolerone (Nyochaa tụlee) online
Ihe na 07 / 19 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na gallery. O nwere 0 Comment.
1.What bụ Mibolerone (Lelee tụlee)?
2.Mibolerone Na-ere ọgwụ
3.Mibolerone eji eme ihe
4.Mibolerone (Lelee Drops) mmetụta
5. Mibolerone ọkara ndụ
7. Mibolerone usoro onunu ogwu
8.Mibolerone mmetụta utịp
Mibolerone ntụ ntụ
I.Mibolerone ntụ ntụ isi agwa:
aha: Mibolerone ntụ ntụ
Ụdị Mkpụrụkpụ: C20H30O2
Ọbara arọ: 302.45
agba: White ma ọ bụ Bụrụ ọcha uzuzu
1. Kedu ihe bụ Mibolerone (Lelee tụlee)?
Mibolerone(lee nlele, Cas No.3704-9-4) a makwaara dị ka dimethylnortestosterone (DMNT), e bu ụzọ dee na 1963. Mibolerone na-ere ahịa site n'aka Upjohn na aha aha Check Drops na Matenon, maka ojiji dịka ọgwụ ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ. E gosipụtara kpọmkwem dịka ọgwụgwọ maka ọgwụ maka igbochi aghara (okpomọkụ) na ndị nkịta nwanyị na-eto eto (nkịta mbolerone).
Mibolerone bụ onye na-agwọ ọrịa anụmanụ anabolic steroid nke a napụtara na 1960 site na Upjohn n'okpuru akara aha Lelee Drops ma emesịa dịka Lelee Medicated Dog Food (mibolerone dog). Ebumnuche nke steroid a bụ imebi oge nkwụsị nke nwa nwanyị nkịta (mibolerone dog) iji gbochie ime ime. Dika otutu hormones anabolic, nke a na-agunye ndi ogwu anu ogwu, oge adighi anya mgbe o kwesiri na ndi na-egwu egwuregwu na ndi ahu na-achota ojiji (mbolerone bodybuilding).
aha Mibolerone, DMNT
Brand aha Lelee Mbelata, Matenon, Lelee Mkpụrụ Eji Nri
molekụla Formula C20H30O2
molekụla arọ 302.45
nchekwa temp Refrigerator
Agba White ma ọ bụ Bụrụ ọcha uzuzu
price Jụọ ajụjụ
N'ihe banyere nchịkọta nke na-arụ ọrụ, mbolerone (Lelee tụlee) bụ otu n'ime steroid kachasị ike. Ọ bụkwa otu n'ime nsogbu ndị nwere nsogbu kachasị emetụ n'ahụ kpatara. Nke a abụghị onye steroid nke ndị novice bodybuilders ma ọ bụ ndị na-eme egwuregwu na-ejikarị eme ihe. Ị ga-ahụkarị iji ya eme ihe n'ememme ọgụ tupu ịlụ agha. Ụfọdụ bodybuilders ga-eji ya tupu ịlụ ọgụ iji nyere aka n'izu ikpeazụ ma ọ bụ na oge mgbapụta maka ntinye ọzọ, mana ọ bụghị ụbụrụ na-ahụkarị nke na-ahụkarị. Anyị ga-enwetakwu ihe gbasara nke a kacha ike steroid mịbolerone (Lelee tụlee) na-aga n'ihu.
2. Mibolerone Na-ere ọgwụ
Ebee ka Mibolerone si? Esi mee ka Mibolerone (Lelee Drops)?
Dịka e kwuru na mbụ, Mibolerone bụ ihe anabolic vet-grade nke e kere na 1960 site otu ụlọ ọrụ a na-akpọ Upjohn. N'oge a, ọ nwere aha mbụ a kpọrọ Lelee nbanye, ma mgbe e mesịrị, ọ gbanwere ihe dị iche: Lelee Food Medicated Dog (mibolerone dog). Ihe kpatara ihe eji eme ihe a bụ iji gbochie ụmụ nwanyị ka ha ghara ime ime. Ọ na-arụ ọrụ iji gbochie nkwụsị nke ụmụ nwanyị ndị inyom, ọ bụ ma nọgide na-abụ n'ụzọ nkịtị, ngwaahịa nke e ji ya na-enyere ndị na-enyere canines aka. Otú ọ dị, dị ka ọtụtụ ọgwụ na otu nzube, ụmụ mmadụ, karịsịa ndị nọ n'àgwà egwuregwu na ahụike, hụrụ na ọ bara ezigbo uru maka ihe ndị ọzọ.
Banyere otu esi eme ka mbolerone (Lelee Drops), ọ dị na nọnborone na Nandrolone ndị a ma ama. Mibolerone bụ anabolic oral etral, ọ na-esite n'aka onye ọzọ na-ahụkarị steroid, Nandrolone. Nke a bụ n'ezie ihe gbanwere site na Nandrolone. Lelee na a na-emepụta mkpụrụ ndụ site n'ịgbakwunye otu methyl ọzọ na ọnọdụ 7th na 17th nke hormone Nandrolone. Ndị a agbakwunyere na ọnọdụ 7th na-eme ka ọ bụrụ ọtụtụ ihe dị ukwuu na mmetụta nke androgenic ya, ọ na-egbochikwa 5-alpha reductase enzyme na-arụ ọrụ. Ndị ọzọ na ọnọdụ 17th na-echebekwa hormone ahụ ka ọ ghara imebi n'oge ingestion. N'ihi ya, n'ụzọ nkà na ụzụ, a na-ewere ya dịka onye na-arịa ọrịa anabolic C17-alpha alkylated alkylated.
Naanị obere ntakịrị a, itty-bitty na-agbanwe, ọ na-eme ka hormone Nandrolone dị ike ma dị ike. O nwere ike ịbụ otu n'ime steroid androgens kachasị ike, nke dị nnọọ mkpa, na Upjohn na-ekwu na Check Drops bụ ihe dị ka okpukpu isii karịa ike testosterone na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu atọ dị ka ihe nwere ike na-arụ ọrụ na androgenic. Na-arụ ọrụ, o yiri ka ọ ka dị ike karị n'akụkụ ndị ahụ.
3. Ihe nbube nke Mibolerone
Ndị na-arụ ọrụ ụlọ, ndị na-ahụ ike, ndị na-eme egwuregwu ike na ndị agha, na-eji mboboronene eme ihe maka nzube nke ịbawanye ụba na arụmọrụ n'ụbọchị mpi. Mibolerone (Nyochaa tụlee) dị irè mgbe eji nanị 30 nkeji tupu asọmpi. Onye ọrụ ahụ ga-enwe mmesapụ ụba, ileba anya na ịsọ asọmpi. Ọ bụ ezie na steroid a enweghị ihe ọ bụla na-akpali akpali, ọ na-egosipụta ihe dị ịrịba ama na CNS (Central Nervous System) site na ụdị ụdị androgen. Nke a bụ naanị ihe mere ndị eji eme egwuregwu ji eji ọgwụ a eme ihe, ebe ọ bụ na ọgwụ ndị a na-enweghị ike ịghọta ya.
Mibolerone bụ steroid nke anabolic ọnụ, nke sitere na nandrolone. Onye oru a bu 7,17-dimethylated nandrolone, nke kachasi ike dika onye anabolic na androgenic dika nne ya na-esighi na methylated. Kemgbe ọtụtụ afọ, mibolerone enwetawo aha ọma n'etiti ndị na-arụ ọrụ ozuzu dịka otu n'ime ala mmiri kachasị ike. Nke a ziri ezi na ụzụ, dịka ọ bụ otu n'ime nanị ndị ahịa steroid ole na ole ahọpụtara dị irè na microgram, ọ bụghị milligram, ọtụtụ. N'ime oge ụmụ anụmanụ na-ahụkarị, e kpebiri na mibolerone nwere 41 ugboro arụ ọrụ anabolic nke methyltestosterone mgbe e nyere ya ọnụ. N'ụzọ dị iche, ọ nwere naanị 18 ugboro ọrụ androgenic. Ọ bụ ezie na a na-ekwusi okwu abụọ ahụ ike site n'aka onye ọrụ a, ọ na-ejide ya n'ụzọ bụ isi. A na-akpọkwa ọgwụ ndị na-eme Estrogenic na ndị ọzọ na ọgwụ ọjọọ a. N'etiti ndị na-eme egwuregwu, a na-ejikarị ya eme ihe mgbe ị na-enye ọzụzụ, ma ọ bụ iji kpalie mwakpo n'ihu mgbatị ma ọ bụ asọmpi.
Mibolerone abụghị onye steroid nke ndị novice bodybuilders ma ọ bụ ndị na-eme egwuregwu na-ejikarị eme ihe.
4. Mibolerone (Lelee Drops) mmetụta
Obi abụọ adịghị ya, isi ihe kpatara na Mibolerone (Lee Drops) bụ ọgwụ na-ewu ewu bụ n'ihi mmetụta dị ukwuu nke androgenic ya, na okwu ndị ọzọ, ikike ya ịkwalite ma wusie ike iwe. Nke a bụ ya mere ọ bụ ndị na-ewu ewu nke ndị agha, ndị na-agba ọsọ egwuregwu, na ndị na-eme egwuregwu ike, kwa. Maka ndị a na-eji asọmpi elu, ọ bụ ihe doro anya na ọ nwere ike ime n'ihe gbasara mmetụta ya; nke a na-eme ka ọ baa uru ma dị irè. N'adịghị ka nkwenkwe ndị a ma ama, ihe ka ọtụtụ n'ụbụrụ na-eme ka ọ ghara ịba ụba. O doro anya na ha nwere ike ịmalite ilekwasị anya ma welie ọkwa nke testosterone nke na-eduga n'inwekwu na mkpali, ma dịka ịlụ ọgụ, iwe iwe, ọtụtụ ọgwụ ọjọọ nwere mmetụta Miberlorone nwere. Mgba aghara abughi ihe ojoo, ma. Ọ bụrụ na ị bụ onye isi, onye nwere ọrụ, ịnwere ike iji oké iwe mee ihe mgbe eji ya eme ihe. Otú ọ dị, ọ bụrụ na mmadụ nwere àgwà ọjọọ, ọ ga-abụ mkpebi amamihe na-adịghị na ya inye ha ma ọ bụ kwe ka ha jiri Mibolerone (Lee Drops).
Isi ihe mere onye ọ bụla ga eji eji ụdị ọgwụ ọjọọ a bụ, ọzọ, iji mee ka nchekwube na ime ihe ike na-eduga n'ọgụ ma ọ bụ ihe mkpirikpi dị mkpirikpi, ụdị asọmpi dị mkpa. Ọ bụ ndị na-emekarị egwuregwu iji were ọgwụ na-eduga n'ịlụ ọgụ iji nwekwuo ike na mgbatị ahụ, mana bodybuilders ga-eji ya na njedebe nke asọmpi ihe oriri iji nweta izu ụka ndị ahụ site na ntụgharị uche. Na bodybuilding, prep dị nnọọ ike, na izu ụka ikpeazụ ahụ mgbe ụfọdụ na-esiwanye ike, ọ dị mkpa mgbe ọ bụla maka ntụgharị uche ikpeazụ, na Mibolerone (Lelee Drops) nwere ike ime nke ahụ maka ha. Ekwesiri iburu n'uche na iji ya eme ihe nwere ike iduga n 'uzo ozo, ma, ya mere, idebe mmiri bu ihe puru ime. Nke ahụ kwuru, ọ bụ ihe nwere ike ịchịkwa ma ọ bụghị dị ka nnukwu nke a na-eji tụnyere akụkụ ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ ihe ịma aka.
Na tiozi, Mibolerone (Lelee Drops) bụ ọgwụ nke ga-enwe ụfọdụ ihe anabolic properties, mana n'ihi na ọ dị ize ndụ maka ahụike gị, ọ na-enweghị isi iji ọgwụ a eme ihe maka nzube ahụ. Nke ahụ kwuru na onye ọ bụla dị mma karịa ịnweta ya maka ịlụ ọgụ, ọzọkwa, ọ bụ naanị otu ihe mere ị ga-eji nye ya ka ọ dị ize ndụ na ọ nwere ike ịnwe n'ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ.
Mibolerone (Lelee Drops) nwere ọkara ndụ nke 4 awa (nkeji ndụ ndụ), nke dị mkpụmkpụ (oge mgbe ọgwụ ahụ na mmetụta ya na-ahapụ ahụ onye ọrụ ahụ). Nke a bụ ya mere a gwara ndị na-eme egwuregwu ka ha jiri ya naanị 20 nkeji gaa na 30 nkeji tupu oge ha ga achọ enyemaka ahụ.
6. Mmiri Mibolerone
Enweghị ihe ọ bụla dị adị na-egosi ihe ọ bụla ma ọ bụ na ndị na-eme egwuregwu na-eji Nleba tụlee na "okirikiri" (usoro ọgbụgba mbolerone) dịka ọ na-ejikarị ndị steroid ndị ọzọ. O yiri ka onye steroid a agbanyewo nkwenye siri ike dị ka ihe na-eme ihe na-egosi na ị ga-enwe mmeri na ịsọ asọmpi. Otú ọ dị, enweghị uru dị ukwuu na ngwongwo muscle nwere ike nweta na ọgwụ a n'ihi eziokwu ahụ ọ ga-eji mee ihe na mkpirikpi oge 2, na obere obere mgbatị. Oge ọ bụla dị na ya, ma ọ bụ ọgwụ dị arọ, na nchegbu ahụike dị nso.
A na-ejikarị Mibolerone mee ihe banyere 30 nkeji tupu ịlụ asọmpi, n'ihi na ọgwụ ahụ na-egosi obere oge mịgorone ọkara ndụ. Ụdị ịṅụ ọgwụ a bụ ntụgharị okwu, nke na-etinye mbadamba nkume nke Mibolerone n'okpuru ire. Ụzọ a na-enye ohere ịnweta mmeri ozugbo na ume mmụba. Omume ọgwụ a na-agwụ n'ihe dịka awa 4, ewepụzie ihe ahụ n'ahụ mmadụ.
Ngwakọta usoro mbolerone zuru ezu bụ banyere 5 nke ụbụrụ nke Mibolerone nke a ga-ewe 30 nkeji tupu oge dị mkpa nke ọzụzụ ma ọ bụ asọmpi. Na-emekarị, a na-eji ọgwụ a eme ihe nanị, ọ bụghị usoro mgbapụta ụkwụ, na-ejighị ọgwụ ndị ọzọ.
N'ozuzu, n'adịghị ka ọtụtụ ndị ọzọ ọgwụ anabolic, A gaghị eji Mibolerone (Check drops) mee ihe n'oge usoro. Nke a bụ nanị ihe na-eme tupu steroid na-eme ka iwe na asọmpi ike. Usoro nchịkwa na obere nkwụsị nke na-eme ihe na-eji Mibolerone eme ihe iji nweta ahụ ike na-enweghị ọgụgụ isi. N'akụkụ nke ọzọ, iwe ogologo oge ma ọ bụ na ntinye dị elu nke na-ebuli elu nwere ike ịkwalite nsogbu ahụ ike. Ka Mibolerone ọkara ndụ dị mkpụmkpụ, a ghaghị ịṅụ ọgwụ ahụ 30 nkeji tupu asọmpi.
Ọ bụrụ na ọ dị gị mkpa iji ọgwụ a, ị nwere ike ịzụta zọneti online na weebụsaịtị anyị www.aasraw.com, ma echefukwala iji ọgwụ ndị na-ekpo ọkụ na-eme ihe iji belata ihe mgbu nke Mibolerone.
8. Mmetụta mmetụta Mibolerone
Mmetụta mmetụta nke Mibolerone dị ọtụtụ. Nke a bụ otu n'ime steroid kachasị ike na ọgwụ ndị anabolic kachasị njọ. Ebe ọ bụ na ụbụrụ mbolerone dị ike nke a abụghị onye steroid onye ọ bụla kwesịrị iji ya mee ihe n'ezie. Enwere ọtụtụ nhọrọ dị mma. Mkpesa ahụ na-ebuwanye ibu na-ekwu tupu agha enwee ike ịnwale, mana ihe ize ndụ ga-eme ka ọ ghara ịba uru na steroid a. Nke a apụtaghị na onye ahụ ga - anwụ, ọ ga - ekwekwa ka a ghara izere nsogbu ahụ mbolerone ruo n'ókè (ọ gaghị enwe ike izere ya kpamkpam) .Ndị mmetụta nwere ike ịgụnye:
Ebumnuche nke Mibolerone-Estrogenic:
Mibolerone na-eme ka akụkụ ahụ dị mma, a na-ewerekwa ya dị ka steroid nke ukwuu dị na ya maka mgbanwe ya na 7,17-dimethylestradiol (estrogen na nnukwu ọrụ ndụ). Gynecomastia nwere ike ịbụ nchegbu mgbe a na-agwọ ya, karịsịa mgbe ọ dị elu karịa ọgwụgwọ ọgwụgwọ nkịtị. N'otu oge ahụ, nchịkwa mmiri nwere ike ịghọ nsogbu, na-eme ka ọ ghara ịkọwa ihe ngwongwo nke nkwonkwo dị ka mmiri na-ejigide mmiri na mmiri na-abawanye. Iji zere mmetụta nke estrogenic siri ike, ọ nwere ike ịdị mkpa iji estrogen dịka Nolvadex®. Onye nwere ike iji ogwugho aromatase dịka Arimidex® (anastrozole), nke bụ ngwọta dị irè maka estrogen control. Otú ọ dị, ndị na-eme ihe na-adịghị mma, pụrụ ịdị oké ọnụ ma e jiri ya tụnyere usoro ọgwụgwọ estrogen na-emepụta, ma nwekwara ike inwe mmetụta ọjọọ na ọbara lipids.
O bu ihe kwesiri ighota na ubolerone na egosiputa ike dika progesin n'ime ahu. Mmetụta ndị metụtara na progesterone yiri nke nke estrogen, tinyere nkwụsị nzaghachi nza nke mmepụta testosterone na ọnụ ọgụgụ dị mma nke nchekwa nchekwa. Progestins na-amụba mmetụta stimulatory nke estrogens na mammary anụ ahụ ibu. O yiri ka enwere mmekọrịta siri ike n'etiti hormonụ abụọ a ebe a, nke mere na gynecomastia nwere ike ịnweta site n'enyemaka nke ndị na-emepụta ihe na-enweghị usoro estrogen dị ukwuu. Ojiji nke estrogen, nke na-egbochi etiti nke estrogenic nke nsogbu a, na-abụkarị iji mebie gynecomastia nke mibolerone kpatara.
Ihe mmetuta Mibolerone-Androgenic:
Mmetụta mmetụta nke androgenic nke mibolerone nwere ike ịgụnye ihe otutu, ntutu ntutu isi na ntutu isi na ụmụ nwoke na-ebute na ịcha mma nwoke. Mmetụta mmetụta nke androgenic nke mibolerone nwere ike ịgụnye mgbaàmà ndị na-alụ ọhụrụ na ụmụ nwanyị; n'eziokwu, ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịm
N'ihi na ndị nwoke na-ahụ maka mkpụrụ ndụ ihe nketa ga-ekpebi oke nke mmetụta ndị androgenic. Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na orrogenicity a na hormone enweghị ike belata site n'iji 5-alpha reductase inhibitor dika Finasteride; ha agagh enwe uru.
Ihe mmetuta Mibolearone-Obi:
Otu n'ime ụzọ kachasị njọ ị ga-esi mebie usoro obi gị bụ ka ị na-ewere Mibolearone. Mgbe ị na-ewere ha, ha ga-eme ọkwa cholesterol gị, karịsịa gị cholesterol ọjọọ, gafere n'elu ụlọ. Ọ na-aga ime ka nsogbu nke obi dị njọ dị njọ karị. Buru ihe ndia nile n'uche mgbe iji Mibolearone. Ị ga-eri ihe oriri nke na-akwado ezigbo ahụike nke obi, nke pụtara na ọtụtụ omega acids dị arọ, obere shuga na obere obere abụba. E wezụga ezi àgwà ndị na-eri nri, usoro mmega ahụ nke na-eme ka kadio dị njọ bụkwa ihe dị oké mkpa. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-adaba na nkọwa ahụ a kpọtụrụ aha, ị kwesịrị ịdị mma na Mibolearone.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị bụ onye nwere ezigbo nkwarụ obi, nke a bụ ọgwụ ọzọ ị na-ekwesịghị ịnwale ịnwe. Naanị, ịnwere ike ịnweta mgbakwunye antioxidant nanị iji chebaa okpukpu abụọ ka a na-ekpuchi ntọala gị niile mgbe ị na-eji ya eme ihe.
Mmetụta mmetụta Mibolerone-Hepatotoxicity:
Mibolerone bụ c17-alpha alkylated compound. Ngbanwe a na-egbochi ọgwụ ahụ site na mgbochi imeju site na imeju, na-ekwe ka ọnụ ọgụgụ dị elu nke ịṅụ ọgwụ na-abanye n'ọbara site na nchịkwa ọnụ. Ọrịa anabolic / androgenic nke C17-alpha nwere ike ịbụ hepatotoxic. Mgbatị dị ogologo ma ọ bụ elu nwere ike ịkpata mmebi imeju. N'ọnọdụ ndị na-adịghị adịkarị egwu ndụ nwere ike ịmalite. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịga leta onye dọkịta kwa oge n'oge usoro ọ bụla iji chọpụta ọrụ imeju na izu ike. A na-ejikarị izu ike XXUMUM-17 na-ebute ihe ndị na-akpata c6-alpha alkylated, na-agbali iji zere imeju imeju imeju. Nsogbu imeju siri ike na-adịkarị ụkọ n'ihi ọdịdị oge nke ọtụtụ ndị na-eji ọgwụ anabolic / androgenic anaralic, ọ bụ ezie na enweghi ike iwepụ ya na steroid, karịsịa ma ọ bụ usoro nhazi dị elu na / ma ọ bụ oge nchịkwa. Rịba ama na akwụkwọ akụkọ US na-akọwa ozi maka mbolerone na-ekwu nanị otu nnyocha ụmụ mmadụ na-eduzi na mịpolerone, nakwa na a kwụsịre akwụkwọ ahụ n'isi ụtụtụ n'ihi oke hepatotoxicity.
A na - enye ndụmọdụ maka mgbatị mmeju umeji dịka Liver Stabil, Liv-52, ma ọ bụ Essentiale Forte ka ha na-ewere ọgwụ ọ bụla na-arịa ọrịa anabolic / androgenic.
Mmetụta mmetụta nke Mibolerone-Mgbochi Testosterone:
Mibolerone na-egbochi mmepụta nke testosterone.
Mmetụta mmetụta Mibolerone-Ndị ọzọ:
Ụra na-ehi ụra ma ọ bụ ehighi ura
O nwere ike imeghari ya
- Ndị ọcha nke anya na-amalite ịtụgharị odo
-Ndị ọbara mgbali
- Ịkwụsị ịmalite ịhụ nwa oge na ụmụ nwanyị
-Ikpochi anya na mkpochapu umu nwanyi
-Itughari olu n'ime ndi nwanyi
-Ọ na-eme ka ọnyà mikpoo nke mịbịa na-ebuwanye ibu
-Anyị na-emetụta triglycerides
-Anwere nnukwu iwepụ ezumike nke endothelial
9. Nyocha Mibolerone
Leba anya na a na-edebanye aha, aha ọjọọ aha mibolerone, CAS No.3704-9-4, ka ọ bụrụ ihe enyemaka n'ichebe ụmụ nwanyị ndị inyom ka ha ghara ịbanye n'ime ọkụ. Ma, a na-atụle ya na androgen, Otú ọ dị, mibolerone dịkwa nnọọ nchịkwa nke bụ usoro maka mmetụta ya na ụmụ nkịta nwanyị. N'ikwu eziokwu, mibolerone nwere ihe dị ka okpukpu abụọ ka ọ bụrụ onye na-enweta ihe ntanetịnta dị ka onye na-agbapụta onwe ya. A maara aha ọgwụ a dị ka ezigbo steroid nke bara uru iji nweta ọtụtụ uka nakwa maka oké ọgba aghara. Ọgwụ a bụ mmepụta nke 19 nke bolasterone na dịka nandrolone nwere ike karịa ma ọ bụ karịa ndị na-emepụta ihe karịa ka testosterone, otú ahụ ka ọ dị na mbolerone ma e jiri ya tụnyere bolasterone. Ihe mgbakwunye nke ìgwè methyl na C-7 abụghị nanị na-eme ka AR na PR rụọ ọrụ mana ọ na-emekwa ka nchịkwa nke mole mole ahụ dịkwuo elu. Mibolerone bụ ihe mgbagha nke nortestosterone (nandrolone); Otú ọ dị, ọ naghị ejikọta ya na metabolite dihydronandrolone nke na-adịghị ike n'ihi ụda ọta nke 7-alpha methyl group.
Mibolerone na-ewere ya dịka steroid kachasị ike nke na-arụpụta mkpụrụ obi dị na obere oge. Otú ọ dị, nke a bụ naanị ma ọ bụrụ na a na-edozi steroid n'ụdị nhazi dị mma, n'ime oge, na n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Nke a bụ n'ihi na e mere mgbatị na mbororonerone na-esote ahụmịhe bara uru na nchọpụta sayensị zuru oke. N'ihe niile, ngwaahịa ahụ bụ ezigbo ma dị irè, ma a ghaghị iji ya na-akpachapụ anya.
10. Zụrụ Mibolerone online
AASraw bụ ụlọ ọrụ a ma ama nke na-enye ọtụtụ ụdị steroid ntụ ọka na ntanetị, na-enye mibolerone maka ire ere n'ịntanetị, ebe ọ bụ na Upjohn kwụsịrị ịkwụsị nchọpụta wee daa ọtụtụ afọ gara aga, ọ bụghị ọtụtụ karama (ma ọ bụrụ na ọ bụla) dị na ngwaahịa mbụ nke Upjohn mere. Ọ bụ ezie na legit Check Drops siri ike na-abịa site na, e nwere ọtụtụ nsụgharị ala nke mibolerone nwere ngwaahịa ndị nwere ike iwu site na ala ahịa. Ahịa nwere ike ịdị iche iche, mana, na njedebe, mg kwa mg nke a bụ ezigbo steroid dị ka atụlere na ndị ọzọ dị ka Deca Durabolin na Dianabol. Ọtụtụ ụlọ ahịa dị n'okpuru ụlọ na-azụta ụgbụ mmiri maka ire ere n'ịntanetị iji mepụta ngwaahịa ndị ahụ.
Tags: zụta Mibolerone ntụ ntụ, Mibolerone ntụ ntụ
Tykerb (231277-92-2) - Onye na-egbu eriri ara Onye na-emepụta MAGL onye na-emepụta JJKK-048 sistem n'Ịntanet